Thu Ta Myay - Page 19 of 85 - True News and Knowledge
October 11, 2020 thuta myay
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ….
မကောင်းတဲ့ကံ တွေ ပပျောက်အောင် ကံကောင်းတဲ့နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို၊ ရှိတယ်။
အကုသိုလ် အကျိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကို လူတွေက ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။
အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရား တွေက ကိုယ့်သန္တာန် ရောက်ပြီ၊ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင်… ဒါက ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်ရမယ်။
ငါတို့လုပ်နေတာ အမှားမရှိဘူး၊ အကောင်း တွေလုပ်တယ်။
သို့သော် အတိတ်တုန်းက မှားယွင်းမှုတွေကလည်း လူတွေရဲ့သန္တာန် လာရောက်ပြီး အကျိုးပေး နေတာတွေ ရှိတတ်တယ်ပေါ့။
အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေ ကော မရှိနိုင်ဘူးလားဆို ရှိနိုင်တယ်။
ရှိလာလို့ရှိရင် ဘာနဲ့အကာအကွယ်လုပ်ရမလဲလို့ ဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ကောင်းတဲ့ကံတရား တွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမယ်။
ဘုရားကို အာရုံပြုမယ်၊ သံဃာကို အာရုံပြုမယ်။ ဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်မယ်။
ဘုရားကို ပူဇော်မယ် နော်။ ဘုရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးမှုတွေရအောင် လုပ်ရမယ်။
ဘုရားပန်း၊ ရေချမ်း အမြဲတမ်း ဆက်ကပ်၊ ဘုရားကို အာရုံပြု၊ ကုသိုလ်တရားတွေကို စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစား၊ အဲဒီလို ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲမကောင်းတဲ့ကံတွေ ပပျောက်သွားနိုင်တယ်။
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့အခါ ဖြစ်လာမယ့် အရိပ်အရောင်ရှိပြီ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဘာနဲ့ ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ဘုရားကို အာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓါနုဿတိကို ပွားရမယ်။
ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို အာရုံပြု၊ ကမ္မဌာန်းထိုင်၊ ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပြီး အချိန်များများ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ရမယ်။
လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါတွေ၊ ကိုယ့်အနီးအပါးမှာရှိတဲ့ အိမ်စောင့်နတ်တွေကို အမျှအတန်း ပေးဝေရမယ်။
အဲဒီ အမျှအတန်း ပေးဝေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့သူတို့နဲ့က မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရလာတယ်။
မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရှိရင် ကိုယ် အန္တရာယ် မရောက်အောင် သူတို့က ကြည့်ရှုပေးတယ်။
အိမ်နားနီးချင်းနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းရင်တောင်မှပဲ ကိုယ့်အိမ် ကြည့်ပေးဖော်ရမယ်။ မတည့်ဘူးဆိုရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမှာ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ၊ ဟုတ်ကဲ့လား။
အဲဒါလိုပဲ ကိုယ်မမြင်ရလို့ အိမ်စောင့်နတ်တို့၊ ကိုယ်စောင့်နတ်တို့ သွားပြီးတော့ ရန်မဖြစ်လေနဲ့။ ရန်ဖြစ်ရင်တော့ အဲဒါ ကိုယ့်ကို ကောင်းကျိုး ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်နဲ့။
နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်က မွေးထားတဲ့ ခွေးနဲ့တောင် ရန်ဖြစ်ရင် ကိုယ့်ကို မျက်စောင်းထိုး ကြည့်တာအနည်းဆုံး ခံရမယ်။ ကြောက်လို့သာ ပြန်မလုပ်တာ ရှိမယ်နော်။
ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း အသိရှိတယ်လေ။ တစ်ခါလောက် ရိုက်ထားတဲ့သူဆိုရင် ရှောင်ပေရှောင်ပေနဲ့ မျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်။
သူတို့ အမြဲတန်း ငါ့များဘာလုပ်မလဲဆိုပြီး ဒေါသနဲ့ ကြည့်တာ။
ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်ဘဲ မေတ္တာ သက်ရောက်အောင် လုပ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းစေခြင်းရဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် အကူအညီရခြင်းပဲ။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဖိတ်ကြားပြီးတော့ သူတို့ကို အရေးတယူ လုပ်ရတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းတောင်မှ လမ်းမှာတွေ့ရင်ကိုယ်က အရင်ခေါ်ရတယ်။
အရေးတယူ နှုတ်ဆက်ရင် ရင်းနှီးတယ်။ မခေါ်ချင်သလိုလို လုပ်သွားရင်သူကလည်း မခေါ်ချင်သလိုလို ပြန်လုပ်မှာပဲ။
လူအချင်းချင်းတောင် ဒီလို ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့ ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ရင်ထဲက အမုန်းကင်းပြီးမေတ္တာဘာဝနာတွေ များများပွားရမယ်။
မေတ္တာပို့မယ်၊ အမျှအတန်း ပေးဝေမယ်၊အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မယ်။
အရာရာမှာ စိတ်ကြည်နူးမှုတွေ ရလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တွေးတာတွေ၊ကိုယ်ကြံတာတွေ၊ ကိုယ်လုပ်တာတွေလည်း လမ်းမှန်ပေါ် ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။”ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ” လို့ မကောင်းတာတွေနဲ့ စိတ်ကညစ်နေရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။
အဲဒီလိုမဖြစ်ရအောင် သတိရှိရမယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကံကြမ္မာ ရဲ့အလှည့်အပြောင်းကြောင့်ကံကောင်းတဲ့အခါ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းတဲ့အခါ မကောင်းဘူး။
ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ထဲနှလုံးထဲ ရောက်အောင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။
ပြီးပြီ ဆိုပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ (wish) ကို ဖော်ပြတာ။
ဆုတောင်းတိုင်းကတော့ မရဘူးပေါ့။ဆုတောင်းတိုင်း ရလို့ရှိရင် ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့။ထိုင်ပြီးတော့ ဆုသာ ဆုတောင်း။
စာမေးပွဲအောင်လို့ရှိရင် ဒီ ၃- လုံးပါပါစေ၊ ၆- လုံး ပါပါစေ၊ထိုင်သာ ဆုတောင်းနေ၊ စာမကျက်နဲ့၊ ရမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဆုတောင်းရုံနဲ့ ဘယ်အရာမှ မရဘူး။
ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ wish ကိုဖော်ပြတာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဆုတောင်းတာ လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့နောက်မှာ လုံ့လ ဝီရိယတို့၊ အသိဉာဏ်တို့ ဆိုတာတွေ လိုအပ်တယ်ပေါ့။
အဲဒီလို အကြောင်းအကျိုး ဆီလျှော်စွာ အလုပ်လုပ်မှ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆိုတာ ရနိုင်တယ်။
အဲဒီလို အချက်တွေကိုလည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောတာဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာအရာခပ်သိမ်းကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိလို့ `ဗုဒ္ဓ` ဆိုတာကို အာရုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအတွက် ကံကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ အံ့အားသင့်စရာ တမူထူးခြား ရွာထူးဆန်းများ
October 10, 2020 mgthuta
သင်္ကေတရဲ့ Shwe Nyan Shin Page မှ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ မြင်နေကြ မဟုတ်ပဲ အံ့အားသင့်စရာ ထူးဆန်းတဲ့ရွာများအကြောင်း တင်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောကကြီးမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ အရာတွေကလည်း အများ ကြီးပဲရှိကြပါတယ်။ အခုရွာလေးတွေကတော့ သာမန်ရွာလေးတွေနဲ့မတူပဲ တမူခြားနေတဲ့အတွက်ဖော်ပြ ပေး လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) လူပုလေးတွေ အများစုနေတဲ့ရွာလေး
ဒီရွာလေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက ရွာလေးတစ်ရွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာနာမည်ကတော့ ရန်ရှီးဖြစ်ပြီး ဒီရွာမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က လူပုလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူပုလေးတွေက ဒီရွာ လေးကို ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြတဲ့ သူတွေမဟုတ်ဘဲ ဒီရွာမှာပဲ မွေးပြီး ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ သူတွေပါ။
ရွာခံ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေ ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ ရွာလေးက အရင်တုန်းက ရွာသူရွာသားတွေ အကုန်လုံး ကျန်းမာပျော်ရွင်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ် နွေရာသီမှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးက ရွာသူရွာသားတွေကို ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။ အသက် ၅နှစ်ကနေ ၇နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေအကုန်လုံး ရောဂါဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဝေဒနာတွေကို စတင်ခံစားကြရပါတော့တယ်။
ရောဂါဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေး တွေအားလုံးဟာ ကြီးထွားမှုနှုန်းတွေ ရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့တွေအရွယ်လောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ လူပုလေးတွေလိုမျိုး ဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရွာမှာရှိတဲ့ လူအများစုက လူပုလေးတွေ ဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ပုံစံတည်းရောဂါဖြစ်တာ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ပဲလား၊ ကျိန်စာဆိုးတွေ ကြောင့်ပဲလားဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။
(၂) လူတစ်ယောက်တည်း နေထိုင်တဲ့ရွာလေး
ရွာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အိမ်ထောင်စုလေးတွေမြောက်မြားစွာ နေထိုင်ကြတဲ့ အစုအဖွဲ့နေရာလေးလို့ သိထားကြ ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့ နေထိုင်သူတစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ရွာလေး အဖြစ်ထူးခြားစွာရှိနေ တာကတော့ ဒိုဘရူဇာဆိုတဲ့ ရွာငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ အဲဒီရွာလေးမှာ နေထိုင်သူစုစုပေါင်း အယောက်၂၀၀လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၂၀၁၉ခုနှစ်လောက်မှာတော့ ဒိုဘရူဇာရွာလေးမှာ နေထိုင် သူ သုံးဦးပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာလေးရဲ့ကံဆိုးမှုတွေကရပ်တံ့မသွားသေးပဲ ရွာသားနှစ်ယောက်အသတ်ခံလိုက်ရ ပါတယ်။
ဒီတော့ ဂရီဇာဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ပဲ ရွာလေးမှာ ကျန်ခဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရွာလေးမှာကျန် ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ ဂရီဇာ ကိုတစ်ခါတရံမှာ သူပိုင်တဲ့ လယ်ထဲမှာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့ အနည်းငယ်ပြဲနေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဝတ်ထားလေ့ရှိတဲ့ ဂရီဇာကို အဖော်ပြုပေးနေတာ တော့ ခွေး၅ကောင်၊ ကြောင်လေး ၂ကောင်နှင့် ဘဲငန်း ၁၅ကောင်၊ ကြက် ၄၂ကောင်၊ ဝက် အကောင် ၅၀၊ဘဲ ကောင်ရေ ၁၂၀ နှင့် ထောင်ချီနေတဲ့ ပျားကောင်ရေတွေနဲ့ တူတူ နေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂရီဇာက တော့ လက်ရှိအချိန်အထိသူ့ရွာလေးကို မစွန့်ပဲ နေထိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် တခြားနေရာကိုထွက်မသွား သေး တာလဲတော့ အခုထိပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
(၃) မိန်းကလေးတွေပဲမွေးတဲ့ ရွာလေး
ပိုလန်နိုင်ငံက ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တဲ့ မြူ့ဂျာစ့်အော်ဇာ့စကီး ဆိုတဲ့ ရွာလေးကတော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံထူးခြား နေပါတယ်။ အဲဒီရွာလေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသားအမျိုးသမီးတွေက ကလေးမွေးလိုက် တိုင်း မိန်းကလေးတွေချည်း မွေးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ချို့ရှိပေမယ့် အားလုံးက အသက်အရွယ်ကြီးနေကြပါပြီ။ ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ဦးတစ်လေမှ ရှိမနေပါဘူး။ အခုလိုဖြစ် တာ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာတောင်မှ မီးဖွားလိုက်တိုင်း မိန်းကလေးတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတဲ့ အ တွက် ရွာရဲ့မျိုးဆက်ပျက်ကိန်းကို မြင်နေရပြီလို့တောင် အချို့က ပြောကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ရွာလေး ရဲ့ အကြီးအကဲ အာဏာပိုင်တွေက သားယောက်ျားလေး မွေးနိုင်တဲ့ မိဘတွေကို ဆုတွေပေးမယ်လို့တောင် ကြေညာထားရပါတယ်။ ယောကျာ်လေးတွေမရှိတော့တာမို့ ရွာမှာ ယောက်ျားတွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို မိန်းကလေးတွေပဲ လုပ်နေရကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
(၄) တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးစကားမပြောပဲ လေချွန်ပြီးဆက်သွယ်ကြတဲ့ ရွာလေး
လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဆက်သွယ်ဖို့ ဘာသာစကားဆိုတာလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာစကားအစား ငှက်တွေလို လေချွန်သံနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောတဲ့ရွာလေး တစ်ရွာရှိနေပါတယ်။ တူရကီရဲ့ အနောက်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ရှိတဲ့ ရွာလေးကတော့ အဲဒီလို လေချွန်သံနဲ့ ဆက်သွယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားမရှိပဲ ငှက်တွေလိုလေချွန် သံပေးပြီး ဆက်သွယ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရွာမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေက စိုက်ပျိုးရေးကိုဦးစားပေးလုပ် ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ လူတွေက လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ပြောင်းဖူး စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ မုန်လာဥ နီစိုက်ပျိုးတဲ့ အလုပ်တွေကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွာလေးဟာ တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာ ရှိတာကြောင့် သူတို့အချင်းချင်း ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ လေချွန်ခြင်းက ပဲ့တင်သံတွေကြောင့် သူတို့အချင်းချင်း သာမက အဝေးတစ်နေရာက သူတို့ရွာသာတွေကို ပါဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အထိ အဆင်ပြေလှတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ရွာလေးတွေက ရွှေဉာဏ်ရှင်ပရိသတ်တွေကို အံအားသင့်စေခဲ့ပါသလဲ။ တကယ်လို့သာ သွားလည်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုရွာလေးမျိုးကိုသွားလည်ချင်ပါသလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးခဲ့ပါဦးနော်။ အားလုံးပဲ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ။
အမ်းမြို့တွင် ဆိုင်ထိုင်ပြီး စားခွင့်ပြုသည့် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် စားသုံးသူ နှစ်ဦးတို့ တရားစွဲခံရ
အောက်တိုဘာ ၉ ၊ စစ်တွေ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့၊ အမှတ်(၃)ရက်ကွက်ရှိ ထမင်းဆိုင်တွင် ထိုင်စားခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးနှင့် စားသုံးသူနှစ်ဦး
အောက်တိုဘာ(၇)ရက်နေ့က သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယမန့်နေ့ (အောက်တိုဘာ ၇ ရက်)က ၄င်းမြို့ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ ဆိုင်များတွင်
ပါဆယ်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိ လိုက်လံစစ်ဆေးစဉ် ဒေါ်ခင်သီတာ ထမင်းဆိုင်တွင် ဆိုင်ထိုင်စားခွင့်ပြုထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်းမြို့ဒေသခံ ကိုမျိုးလွင်က DMG သို့ပြောသည်။
“အဲဒီနေ့က ဆရာဝန်ကြီးအပါဝင် အဲဒီအဖွဲ့ကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတွေ့တာ။ ဘယ်သူက တရားလိုလုပ်ပြီးတော့ စွဲထားတာမသိသေးဘူး” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ထိုသို့ တရားစွဲခံရခြင်းမှာမှန်ကန်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၅/၃(က)ဖြင့် အမ်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မိုးက
တရားလိုပြုလုပ်ကာ စွဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကိုကိုမြတ်က DMG သို့ပြောသည်။
“သူတို့ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲထားတယ်။ ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မိုးက တရားလို လုပ်ပြီးတော့စွဲထားတာ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းရမယ့်ဆိုပြီးတော့အသိပေးထားတာကို သူတို့က မလိုက်နာကြပါဘူး” ဟု ၄င်းကရှင်းပြသည်။
အမ်းမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မိုးက “အဲဒီဆိုင်ရှင်ကို Stay at home ကာလကတည်းက ကျွန်တော်တို့ပြောတာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပြီ။
ကိုဗစ်ကာကွယ်၊ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းပါလို့ အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက် အခုလိုတရားစွဲရတာပါ” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်ကိုသိလို၍ အမ်းမြို့နယ် ရဲစခန်းအား DMG က ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပေ။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ဘောက်သီးစုရပ်ကွက်ရှိ“မြင့်မြတ်မောင်” ဘော်ဒါဆောင်တွင် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ
ပညာသင်ကြားသည်ဟုဆိုကာ ဘော်ဒါဆောင် ပိုင်ရှင်အား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့်အရေးယူရန်
မြို့နယ် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းဘော်ဒါဆောင်မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပညာသင်ကြားနေသဖြင့် ကျောင်းသူ ၅ ဦးနှင့် ဆရာမ ၁ ဦးတို့ Covid Positive ထွက်ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း
မြို့နယ် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီက ဆိုထားသည်။
ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျောင်းများပိတ်ရန်ညွှန်ကြားချိန်တွင် ၎င်းကျောင်းသားများမှာ မိမိနေရပ်သို့ ပြန်ရန်အဆင်မပြေသဖြင့် လက်ခံထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု
“မြင့်မြတ်မောင်”ဘော်ဒါဆောင်ပိုင်ရှင် ဦးမောင်မောင်သိန်းက ရှင်းလင်းထားသည်။
လက်ရှိ စစ်တွေမြို့တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ကြရန် ဒေသ အာဏာပိုင်များက ညွှန်ကြားထားပြီး
ဈေးဝယ်သွားရန်နှင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်သွားလာရန် အပြင်ထွက် ကတ်များကို ထုတ်ပေးလျက်ရှိနေသည်။
ယင်းသို့ အပြင်ထွက်ခွင့်အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမပါရှိဘဲ အပြင်ထွက်သူများကို စစ်ဆေးပြီး အရေးယူ မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ထို့အတူ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင်လည်း နေ့လည် ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးကိစ္စမှလွဲ၍အပြင်ထွက်လျှင် သဘာဝဘေးအန္တဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု
ဥပဒေပုဒ်မ-၃၀(က)အရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်ကိုဗစ် ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီအချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ရခိုင်တွင်
ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ (၁၈၁၁)ဦးအထိရှိလာနေပြီး ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ (၁၅၁၀) ဦးရှိကာ သေဆုံးသူ (၈) ဦးအထိရှိကြောင်း Rakhine Covid-19 Watch မှ သိရသည်။
Photo Crd : Covid Information For Rakhine
ဆိုင်မှာ သွားဝယ် ရင် သောင်းချီပေးရ မယ့် နာမည်ကြီး ဗီတာမင် ဒီ ကို အလကား ရယူနည်း
ကိုဗစ် အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဗိုက်တာမင် D အကြောင်း ဖတ်ဖူးသမျှမျှဝေပါရစေ။ ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေက ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေး အားဆေးပေးရာမှာ Zinc အပြင် ဗိုက်တာမင် D ကို ပေးနေကြပါပြီ။
လူ့အရေပြားအောက် က အဆီကို နေရောင်ထိတဲ့အခါ အဆီက နေရောင်က UVB ကို စုတ်ယူပြီး ဗိုက်တာမင် D ချက်လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ D ကို ပို့ပေးတယ်။ ဗိုက်တာမင် D ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ ကယ်လ်စီယံ ကိုစုတ်ပေးတယ်၊ အရိုးတွေမာစေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ထဲဝင်လာတဲ့ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယား နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တွေကို ကာကွယ်တယ်။ ကင်ဆာကို တိုက်တယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ကို ကာကွယ်တယ်။ ကြွက်သား ကို တောင့်တင်းစေတယ်။
ဗိုက်တာ မင် D လျော့ရင် ခါးနာတယ်၊ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်တယ်။ တခြားရောဂါတွေဝင်တယ်၊ ဆံပင်ကျွတ်တယ်။ ရောဂါစုံနဲ့ သေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေ နေပူစာ လှုံကြတယ်၊ နေ့တိုင်း နေပူစာလှုံရင် လူကြီးတွေကျမ်းမာလာမယ်။ အခန်းထဲ အောင်းခိုင်းထားရင် ဗိုက်တာမင် D ချို့တဲ့ပြီး ရောဂါတခုပြီး တခု ဖြစ်မယ်။
၁၀ နာရီ မှ ၁၁ နာရီကြား နေ (ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် နေ့ခင်းနေ) မှာ ၁၀ မိနစ် ကနေ နာရီဝက်ကြား ရပ်ပေးပါ။ နေပူပြင်းရင် ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ လိုပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် နေက ရတဲ့ D ဟာ 20000 Iu အထိရနိုင်တယ်။ တပါတ်မှာ သုံးခါ အနည်းဆုံးနေရောင် ထိပေးရရင် တပါတ်စာ D လုံလောက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတခုကို နေရောင်တိုက်ရိုက်ရရင် ရပါပြီ။ တကိုယ်လုံးချွတ်စရာမလိုပါဘူး။
နေရောင်ထဲမှာမဟုတ်ပဲ အပြင်ထွက်နေရင်တောင် ဗိုက်တာမင် D ကိုသွယ်ဝိုက်ရပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် D ကို မှန်ကတဆင့်ဝင်တဲ့ နေရောင်ကနေ လုံးဝ မရပါဘူး။ နေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှ ရတာပါ။
နေပူစာ လှုံဖြစ်အောင် လှုံကြပါ။ နေ့တိုင်းလှုံလေ ကောင်းလေပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဗိုက်တာမင် တမျိုး အလကား ရတာပေါ့။ သောင်းချီပေးရတဲ့ ဗိုက်တာမင် D ဆေး တွေ ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
သတင်းကောင်းပါ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးသန်း၂၀၀၀ ဖြန့်ဝေပေး မည့် WHO ၏(၉၂)နိုင်ငံ အစီအစဉ် တွင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ဗျာ
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များမှ လာမည့်နှစ်တွင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်လုပ်ရန် အပြိုင်အဆိုင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီး လာမည့်နှစ်တွင် WHO မှ ကာကွယ်ဆေး သန်း( ၂၀၀၀ ) ဖြန့်ဝေပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိနေပြီး အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
COVAX အဖွဲ့အစည်း သည် ကာကွယ်ဆေးထိုးစီမံချက်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကာ အလယ်အလတ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသော နိုင်ငံများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၉၂)နိုင်ငံတွင်ရှိသော လူဦးရေ (၂၀)%ကို လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် ပထမဦးစားပေးတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်ကာ တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ရောဂါအခံရှိသူများကို အသီးသီးရွေးချယ်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သတငျးကောငျးပါ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးသနျး၂၀၀၀ ဖွနျ့ဝပေေး မညျ့ WHO ၏(၉၂)နိုငျငံ အစီအစဉျ တှငျမွနျမာနိုငျငံပါဝငျပါတယျဗြာ
COVID-19 ကပျရောဂါဖွဈပှားမှုကို အမွနျဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျရနျအတှကျ သိပ်ပံပညာရှငျမြားမှ လာမညျ့နှဈတှငျ လုံခွုံစိတျခရြပွီး ထိရောကျသော ကာကှယျဆေးကို ထုတျလုပျရနျ အပွိုငျအဆိုငျအားထုတျကွိုးပမျးလကျြရှိနပွေီး လာမညျ့နှဈတှငျ WHO မှ ကာကှယျဆေး သနျး( ၂၀၀၀ ) ဖွနျ့ဝပေေးမညျ့ အစီအစဉျရှိနပွေီး အဆိုပါအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံပါဝငျကွောငျး ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာခငျခငျကွီးမှ ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။
COVAX အဖှဲ့အစညျး သညျ ကာကှယျဆေးထိုးစီမံခကျြ၊ ကာကှယျဆေးထိုးလုပျငနျးမြားနှငျ့ဆိုငျသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈပွီး ကိုဗဈကာကှယျဆေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆောငျရှကျထားသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈကာ အလယျအလတျနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုနောကျကသြော နိုငျငံမြားလညျး ပါဝငျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
(၉၂)နိုငျငံတှငျရှိသော လူဦးရေ (၂၀)%ကို လှမျးခွုံနိုငျမညျဖွဈသညျ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံအနနှေငျ့ ပထမဦးစားပေးတှငျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ဝနျထမျးမြားကိုလညျးကောငျး၊ ဒုတိယဦးစားပေးအနဖွေငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြားဖွဈကာ တတိယဦးစားပေးအနဖွေငျ့ ရောဂါအခံရှိသူမြားကို အသီးသီးရှေးခယျြထားကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
တိရိစ္ဆာန်တွေ သားမွေးရန် ကိုယ်ဝန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် လွယ်ထားရတယ်လို့ သင်တို့ထင်သလဲ
မိခင်တစ်ဦးသည် များသောအားဖြစ် ကိုယ်ဝန်ကို (၁၀) လလောက်လွယ်ထားရပါတယ်။ မိမိ ဝမ်းဗိုက်ထဲက ကလေးကျန်းမာရန် ကလေးများလိုအပ်သည့် အရာအားလုံးကို ရရှိစေရန် အချိန်ပေးပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်များသည် သူတို့၏ကလေးများကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း (သို့) တစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်း မွေးဖွါးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်တိရစ္ဆာန်တွေက ကိုယ်ဝန်ဘယ်လောက်ကြာအောင်လွယ်ထားရသလဲဆိုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်းပါးအောက်တွင် ဗဟုသုတရစေရန်အတွက် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Opossum အမည်ရှိ ကြွက်မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကတော့ ၁၂ ရက်သာကြာပါတယ်။
၂။ဂီနီဝက် တွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာ ကိုယ်ဝန်သယ်ဆောင်ထားရပါတယ်။
၃။ကြောင်တွေရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကတော့ ၆၃ ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ခွေးတွေကတော့ ၆၅ ရက်ကြာမြင့်ပါတယ်။
၅။ Raccoon အမည်ရှိ ကြောင်မျိုးစိတ်တွေကတော့ ၆၅ ရက်ကြာကိုယ်ဝန်လွယ်ရပါတယ်။
၆။ကျားတွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၁၁၀ ကြာကိုယ်ဝန်လွယ်ရပါတယ်။
၇။ဝက်တွေရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကတော့ ၁၁၅ ရက်ကြာမြင့်ပါတယ်
၈။ပန်ဒါတွေကတော့ ၁၃၅ ရက်ကြာမှကလေးမွေးပါတယ်။
၉။Lemur အမည်ရှိတဲ့ မျောက်မျိုးစိတ်တွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၁၃၅ ရက်ကြာကိုယ်ဝန်သယ်ဆောင်ထားရပါတယ်။
၁၀။ Bear ဝက်ဝံတွေကရက်ပေါင်း ၂၂၀ မှသားမွေးပါတယ်။
၁၁။ဖျံများကတော့ ရက်ပေါင်း ၂၈၀ ကြာပါတယ်။
၁၂။မြင်းတွေကတော့ ၃၃၅ ရက်ကြာပါတယ်
၁၃။လင်းပိုင်ဖြူတွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၄၅၀ ကြာကိုယ်ဝန်သယ်ဆောင်ထားရပါတယ်။
၁၄။သစ်ကုလားအုပ်များကတော့ ၄၆၅ ရက်ကြာအောင်ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ရပါတယ်။
၁၅။Walrus တွေကတော့ ရက်ပေါင်း ၆၀၀ ကြာမှတစ်သားမွေးပါတယ်။
၁၆။တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာတော့ ဆင် ကတော့အကြာဆုံးကိုယ်ဝန်သယ်ဆောင်သောမိခင်လို့ထင်ပါတယ်။သူကတော့ ရက်ပေါင်း ၆၆၅ ရက်ကြာမြင့်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံအတွင်း ဆန်တစ်ပြည် ၁၀၀၀ကျပ်နှုန်း ကားဖြင့်လှည့်လည် ရောင်းချပေးမည်
နိုင်ငံတော်အရန်ရိက္ခာဆန်အဖြစ် စုဆောင်းထားသော ဧည့်မထဆန်အုပ်စု ဆန်များကို အများပြည်သူများသို့ တစ်ပြည်လျှင် တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်း၊ တစ်အိတ်လျှင် နှစ်သောင်းလေးထောင်ကျပ်နှုန်းဖြင့် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့နှင့် (၁၁)ရက်တို့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များသို့ ကားဖြင့် လှည့်လည်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ သင်္ဂဇာချောင်းပတ်လမ်း၊ ချမ်းသာရဘုရား အနောက်ဘက်မုခ်အနီးတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ စတင်ကာ သွားရောက်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသောရပ်ကွက်များကိုလည်း ကားဖြင့်ဆက်လက် လှည့်လည်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကာ လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လည်း စနစ်တကျ ကြပ်မတ်ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆန်တစ်ပြည်ကို တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သလို ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ ချင်း စသည့် အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်ရန် ထည့်သွင်းရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Source : Ah Lin Nge
မန်တလေးမွို့၊ ခမျြးအေးသာစံအတှငျး ဆနျတဈပွညျ ၁၀၀၀ကပျြနှုနျး ကားဖွငျ့လှညျ့လညျ ရောငျးခပြေးမညျ
နိုငျငံတျောအရနျရိက်ခာဆနျအဖွဈ စုဆောငျးထားသော ဧညျ့မထဆနျအုပျစု ဆနျမြားကို အမြားပွညျသူမြားသို့ တဈပွညျလြှငျ တဈထောငျကပျြနှုနျး၊ တဈအိတျလြှငျ နှဈသောငျးလေးထောငျကပျြနှုနျးဖွငျ့ အောကျတိုဘာလ (၁၀)ရကျနနှေ့ငျ့ (၁၁)ရကျတို့တှငျ မန်တလေးမွို့၊ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျအတှငျးရှိ ရပျကှကျမြားသို့ ကားဖွငျ့ လှညျ့လညျရောငျးခပြေးသှားမညျဖွဈကွောငျး မွနျမာနိုငျငံဆနျစပါးကုနျသညျမြားအသငျး (မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး) ဥက်ကဋ်ဌထံမှ သိရသညျ။
အောကျတိုဘာလ(၁၀)ရကျနတှေ့ငျ မန်တလေးမွို့၊ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ၊ သင်ျဂဇာခြောငျးပတျလမျး၊ ခမျြးသာရဘုရား အနောကျဘကျမုချအနီးတှငျ နံနကျ(၉)နာရီမှ စတငျကာ သှားရောကျရောငျးခပြေးမညျဖွဈပွီး ကနျြရှိသောရပျကှကျမြားကိုလညျး ကားဖွငျ့ဆကျလကျ လှညျ့လညျရောငျးခပြေးမညျဖွဈကာ လူစုလူဝေးမဖွဈအောငျလညျး စနဈတကြ ကွပျမတျရောငျးခပြေးသှားမညျဟု သိရသညျ။
ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ဆနျတဈပွညျကို တဈထောငျကပျြနှုနျးဖွငျ့ ဝယျယူနိုငျသလို ကွကျသှနျနီ၊ အာလူး၊ ခငျြး စသညျ့ အခွခေံစားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားကိုလညျး ဝယျယူနိုငျရနျ ထညျ့သှငျးရောငျးခပြေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။Source : Ah Lin Nge
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ခိုးဖွင့်ခဲ့တဲ့ ကေတီဗီမှ ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဆိုင်လာဖောက်သည်များကို ထောင် ၁ နှစ်ခွဲ ချမှတ်
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ကေတီဗီဆိုင်က ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကေတီဗီကိုသွားရောက်ပြီး သီချင်းဆိုသူအချို့ကို မနေ့အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ညနေပိုင်းက မုံရွာမြို့နယ်တရားရုံးကနေ အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ခွဲ အမိန့်ချလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မုံရွာ (အလုံ သုံးထောင့်ချွန်း) လမ်းဆုံအနီးမှာ တရားမဝင်ဖွင့်နေတဲ့ ရိမ်းဘိုးကေတီဗီဆိုင်ကို ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာမှာ ကေတီဗီအခန်းအတွင်း သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဧည့်သည် အမျိုးသား ၃ ယောက်နဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ၄ ယောက် သီချင်းဆိုနေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီး အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“အဲ့ဒီအမှုကို အလုံရဲကင်းစခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် မိုးမင်းထွန်းက အမှုစစ်တယ် ၊ ရဲစွဲချက်အမှတ် ၇၇၆/၂၀၂၀ နဲ့ တရားစွဲတယ် ၊ တရားရုံးက ရာဇသတ်ကြီး အမှု အမှတ် ၂၀၅၅/၂၀၂၀အရ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က အမှုတွဲလက်ခံပြီး ကြားနာစစ်ဆေးတယ် ၊ နောက်တစ်နေ့ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှာ မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်စုနန္ဒာစိုးက ဥပဒေပုဒ်မ-၂၅ အရ အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ၆ လ ကျခံဖို့ အမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်”လို့ တရားစွဲဆိုရေးမှာပါဝင်တဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က မြူးဇစ်ဇုန်ကေတီဗီနဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကစလို့ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး နဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ တားမြစ်အမိန့်ကိုကျော်လွန်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကေတီဗီ ၊ ဘား၊ အနှိပ်ခန်းတွေ အပြင် ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အိမ် ၂ အိမ် အပါအဝင် အမှုပေါင်း ( ၈၅၆ )မှု ၊ ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားပေါင်း (၁၆၂၆ )ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၈၂) ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
နေ့စား၊ အနှေးယာဉ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီအလုပ်သမားများ ထောက်ပံ့ကြေး (၃၀၀၀၀) အတွက် စာရင်းပေးနိုင်ပြီ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီး လူမှုဖူလုံရေးစနစ်မှာ အကျုံးမဝင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံးတွေကို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီလို့ မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(FWFM)ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေးစနစ်မှာအကျုံးမဝင်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား၊ နေ့စား၊ ယာယီ၊ ပုတ်ပြတ်၊ အနှေးယာဉ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ အလုပ်သမားတွေကို နိုင်ငံတော်က တစ်ယောက်ကို ကျပ်(၃၀၀၀၀)ထောက်ပံ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လျှောက်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။
လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ ကြပ်တည်းနေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ နာမည်၊ အဖေနာမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လက်မှတ်၊ မှတ်ချက်ပါတဲ့ Form ကို ဖြည့်သွင်းပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံးတွေကို လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေး အကျုံးမဝင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ တစ်ယောက်ကို ကျပ်(၃၀၀၀၀)ပေးမယ်လို့ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံချိန် အလုပ်သမားလူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန်မှာတော့ အစိုးရခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်မသွားကြဖို့နဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဝ န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း အောက်တိုဘာ(၂၁)ရက်နေ့အထိ အလုပ်မသွားဖို့ ကျန်းမားရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ်လူနာ တွေ့ရှိမှုနှုန်း လျော့ကျလာပေမယ့် သေဆုံးနှုန်း မြင့်တက်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်း
အောက်တိုဘာ ၉ သုံးသပ်ချက် ကိုဗစ် သေနှုန်းက ဘာကြောင့်တက်လာတာလဲ?
အဖြေရှာဖို့တော့လိုနေပါပြီ ကိုဗစ် သေနှုန်းကို လူနာတွေထိုးတက်လာတဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ကနေ ၃၀ အထိ ပြန်ကြည့်တာ တရက်ပျမ်းမျှ ၁၅ယောက်သေပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁ ကနေ ၉ အထိ ပြန်တွက်တာ တရက်ပျမ်းမျှ ၂၈ ယောက်ခန့်သေပါတယ်။
အသေများဆုံး နေရာတွေက ၅ အောက်တိုဘာအထိ ဒေတာအရဆို ရန်ကုန်က ၂.၈ ရာနှုန်း၊ မွန်ပြည်နယ်က ၂.၂၈ ရာနှုန်း၊ ပဲခူးက ၀.၆ ရာနှုန်၊း မန်းလေးက ၀.၄ ရာနှုန်း၊ ရခိုင်က ၀.၃ ရာနှုန်း
ကိုဗစ်များတဲ့ နိုင်ငံတိုင်း နေရာတိုင်း လူသေနှုန်း မမြင့်ပါဘူး ပုံကိုကြည့်ရင်မြန်မာက သူများတွေလို ကေစ့်များလို့ အချိုးကျ သေနှုန်းများတာနဲ့မတူပဲ တစုံတရာကြောင့် ကေစ့် သိန်းမချီသေးတာတောင်မှ သေနှုန်းက ၉၀ ဒီဂရီ နီးပါး ထိုးတက်လာတာတွေ့ရပါမယ်
ဘယ်လိုနေရာတွေ နိုင်ငံတွေ သေတာများလဲ အရည်အသွေးရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု quality care လို့ ခေါ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ လျော့ကျသွားရင် သေနှုန်းတွေ တက်လာပါတယ်။ ဥပမာ ဆေးရုံတော့ တက်ပါတယ် ဆရာဝန် အောက်ဆီဂျင် အာဟာရ ဆေးဝါး အစစအရာရာ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေရင် အသက်ကြီးသူတွေ သေပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ပထမပတ် ပျမ်းမျှ ၂၈ ယောက် ရှိပါတယ် ဒုတိယပတ် ကို စောင့်ကြည့်ပါ ပိုများလာပြီဆိူ Refine strategy လိုနေပါပြီ။ တနာရီ ကို ပျမ်းမျှ တယောက်ကျော်သေနေတာ ကို ဘယ်လိုဆွဲချမလဲ ဆိုတာ အရေးတကြီးစဉ်းစားရပါတော့မယ်
ဒီတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆို လူနာသိန်းချီ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ သေနှုန်းကို လူနာ သောင်းဂဏာန်းပဲ ရှိတဲ့ မြန်မာက ၂ ပတ်အတွင်း ဖြတ်ကျော်သွားပြီး မြန်မာ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုက ဒါပဲလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။
တကမ္ဘာလုံး စုစုပေါင်းသေနှုန်းမှာ မြန်မာက ဒီနေ့ အဆင့် ၇၅ နေရာကို တက်လှမ်းလာပြီး နေ့စဉ် လူနာသစ် သေနှုန်းမှာတော့ အဆင့် ၁၈ နေရာ ဆင်းသွားပါတယ်။
ဘန်ကောက်၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀